အနာဂတ်သည်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါလား — | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဟော့ကင်းသည် ဤသို့ရေးသားခဲ့ဖူးသည် —
(Is everything determined? The answer is yes, it is. But it might as well not be, because we can never know what is determined.)
အရာရာသည် ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါလား? ဟူ၍ မေးသော မေးခွန်းအတွက် အဖြေသည် – ဟုတ်ကဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါဟု ဖြေနိုင်ပါသည်။ သို့သော် မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့ ခံယူနိုင်ကြောင်းလည်း ထည့်ပြောပါတယ်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့က ဘာဆုံးဖြတ်ပြီးသား ဖြစ်သည်ကို မသိသောကြောင့်ပါ – လို့ ဟော့ကင်းသည် သူ၏ (Is everything determined?) ဟူသော စာစု၌ ရေးသားခဲ့သည်။
လူသည် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားနိုင်ပါသလား? ဟူသော မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍မူ လူ၏အမူအရာကို ကြိုတင်ပြော ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ပါသလား? ဟူသော မေးခွန်းဖြင့် အဖြေထုတ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော် အချို့နေရာများတွင် ကြိုတင်ပြောလိုက်သဖြင့် မူလဘူတ အခြေအနေ ပျက်ဆီးရွေ့လျောသွားသည့် အခြေအနေလည်း ရှိသည်။ လွန်စွာ အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းသည် – ၎င်းကို (The fact of makingaprediction would disturb the system –) ဟူ၍ ဟော့ကင်းက ရေးသားခဲ့ဖူးသည်။
ထို့ကြောင့် လွတ်လပ်သည် မလွတ်လပ်သည် ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရာ၌ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ ချိန်ချိန်ဆဆ၍ ယူတတ်ရန် လွန်စွာအရေးကြီးသည်။ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် ပညာရပ်ကလည်း ဤသို့ စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၌လည်း ယင်းအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားချက်များ ရှိလေသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ပို၍နက်နဲသော သဘောကို ဆောင်သည်။ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် ပညာရပ်ကလည်း ဤကိစ္စကို နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် သုခမိန်သို့ စဉ်းစား၍ တရားသေသဘောကို မျက်ကန်းလက်ခံ ခြင်းမျိုးမပြုကြောင်း ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။
Tags: Myanmar Posts, ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဟော့ကင်း
This entry was posted in Buddhism & Science and tagged Myanmar Posts, ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဟော့ကင်း. Bookmark the permalink.